Thenga i-Lorcaserin HCL hemihydrate powder (856681-05-5) hplc≥98% - I-Wisepowder
I-Lorcaserin HCL hemihydrate powder (856681-05-5)
I-Lorcaserin HCL hemihydrate powder yifom ye-hemihydrate yeLorcaserin HCL okanye iLorcaserin hydrochloride, eyaziwa njengegama lophawu lwebhanti. I-Lorcaserin HCL hemihydrate powder, ekhethekileyo i-5HT2C receptor agonist ekhethiweyo, isetyenziselwa ukunyanga ukukhuluphala. Kuboniswe ukunciphisa umzimba kunye nokutya ukutya kwiimodeli zezilwanyana ukutyeba kakhulu, kwaye kucingelwa ukuba ukujolisa i-5HT2C receptor kunokutshintsha ubunzima bomzimba ngokulawula ukugcwala.
I-Lorcaserin HCL hemihydrate umgubo wevidiyo
I-Lorcaserin HCL hemihydrate Inkcazo ngokubanzi
I-Sulforaphane Powder (142825-10-3)
I-HBT1 Powder (489408-02-8)
I-Orlistat powder (96829-58-2)
I-Pterostilbene Vs Resveratrol: Yeyiphi eNgcono kwiMpilo yakho?
Izibonelelo ezili-10 eziPhezulu zezeMpilo ze-Glutathione Kumzimba wakho
Izinto ezingafunekiyo zeRegayisi ebomvu: Izibonelelo, iDosi, kunye neziphumo zeSide